काठमाडौंमा कोरियन प्रविधिको निःशुल्क थेरापी सेवा — Newskoseli
काठमाडौंमा कोरियन प्रविधिको निःशुल्क थेरापी सेवा
काठमाडौं, १८ मङ्सिर ।
राजधानीमा कोरियन प्रविधिको थेरापीमार्फत स्वस्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ ।
लामो समय अमेरिकामा बसेर फर्केका बाँकेका प्रमेश शर्माले कोरियामा निर्मित थेरापी मेसिन नेपाल ल्याएर सेवा दिन थालेका हुन् । उक्त थेरापी मेसिनले शरीरमा तापक्रम बढाएर विकार पदार्थ बाहिर निकालेर सन्तुलन कायम गर्ने उनले बताए । ‘बायो सेरामिक स्टेन’बाट बनेको कोरियन मेसिनद्वारा सेवा प्रदान गरिने जानकारी उनले दिए ।
दक्षिण कोरियामा भने एक दशक अघिदेखि यस प्रकारको थेरापी उपचार पद्धतिको सुरु भएको हो । थेरापी सेन्टरको उदघाटन गर्दै सङ्घीय सांसद प्रदीप यादवले स्वस्थ जीवनयापनका लागि थेरापीले सहयोग गर्ने बताउँदै निःशुल्क सेवा प्रदान गरिनु निकै सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।
विदेशबाट फर्केर केही गर्छु भन्ने सोचका साथ आफूले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको ‘काइनोज नेपाल’ का सञ्चालक शर्माले बताए । उक्त सेन्टरमा मेरुदण्ड, टाउको, खुट्टा र हातको थेरापी गरिनेछ । थेरापीबाट घुँडा, जोर्नी, कम्मर र ढाडको दुखाइ, रक्तचाप, मुटु र आँखालगायतका सममस्याको समाधान गर्न सहयोग मिल्ने जानकारी उनले दिएको राससले जनाएको छ ।
क्यान्सरै पत्ता नलगाउने यस्तो पनि ‘क्यान्सर अस्पताल’ !
सरकारी डाक्टरहरुको धम्की : ‘सामूहिक राजीनामा दिन्छौं’
गुणकारी ‘वीरे नुन’ : के–के छन् यसका फाइदा ?
डिप्रेसनबाट पीडित हुनुहुन्छ ? लौ यसरी बच्नोस्…
औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा सावधान रहनोस् !